Kismaayo News » Farmaajo ma ciidan buu doontay mise ceeb?
Farmaajo ma ciidan buu doontay mise ceeb?
Kn: Socdaalka uu madaxweynaha Soomaaliya ku marayo dalalka dariska ayaa marka xagal kale laga eego u muuqda mid siyaabo dhawr ah uga badalan safaradiisii hore ee uu ku maray dawladaha gobolka.
Arinta ugu muhiimsan oo ah qadarinta, xushmadda iyo soo dhaweynta loo sameeyay oo doorkani aad uga liidata tii hore ee uu kala kulmay dalalka Uganda iyo Itoobiya wax yar kadib caleemo saarkii loogu sameeyay Xamar.
Indhahaaga ayaa kuu macalin ah marka aad milicsato sawirada ka muuqata xagga sare. Waa kaaf iyo kala dheeri labada marxaladood, waxayna ku fasileen xeel-dheerayaashu in soo dhawayntii saraysay ee markii hore loo sameeyay ay ka turjumaysay taageeradii shacabka Soomaaliyeed siiyeen, balse hadda maadaama ay yaqiin sadeen in taageeradii loo hayay ay hoos u dhac ku yimid ayay ku dhiiradeen dalal kani inay si meeqaam hoose ah u soo dhaweeyaan.
Waxaa xusid mudan in dabinka Farmaajo loo qoolay si loo wiiqo taageerada shacabka ay kow ka ahayd dhiibitaankii Qalbidhagax oo si sahlan loogu qanciyay. Itoobiyaanka oo xubin ka ah 15 dal ee golaha amaanka ayaa ku qanciyay Xukuumadda Farmaajo hadii ay u soo gacan galiyaan Qalbidhagax in ay golaha amaanka hor gayn doonaan codsi ku aadan in Soomaaliya laga qaado cunaqabataynta hubka, laakiin xukuumadda Farmaajo markay oofisay cahdigii, Itoobiyaanku way balan-fureen oo way diideen inay golaha amaanka hor dhigaan codsigii ka qaadista xayiraadda hubka. Waa tii Soomaalidu tiri “markhaati beenaale nin kuu furay dantaadana ku oofsatay, wuxuu yahayna baratay” ee Itoobiyaanku markay dantoodii ugu muhiimsanayd oo ahayd inay kalsoonida shacabku ku qabo xukuumadda Farmaajo wiiqaan ka fushadeen ayay haatan rabaan inay dhulka ku jiidaan. Soodhawaynta liidata ee farmaajo loogu sameeyay Uganda iyo Itoobiyana waa astaan bilow u ah xagal daacin ku soo fool leh.
Dhinaca kale, lama hayo war sugan oo ku saabsan sababta uu Farmaajo booqashadiisa uga booday Kenya oo kamid ah dalalka ciidamada ugu badan ay ka joogaan Soomaaliya, waxaase la sheegayaa inuu kalsooni ku qabo Uhuru inuu ka jawaabi doono dalabkiisa. Dalalka uu cagta marinayo waxaa kamid ah Jabuuti oo uu caawa ku sugan yahay.
Waxaa hubaal ah in haybadda iyo sumcadda masuul kasta ay ku jirto jacaylka iyo kalsoonida ay ku qabaan Shacabka uu u talinaayo, haday luntana ay la lumayso karaamada ay u hayaan dadyowga kale ee lagaba yaabo inay nacab yihiin ku farxa jab kaaga. Hadaba su’aasha ka dhalan karta socdaalka madaxweynaha ayaa ah, Farmaajo ma ciidan buu doontay mise ceeb?
Dhanka kale waxaa ku cusbaa socdaalka madaxweynaha inaan markani aysan ka dhinac muuqan marwadiisa oo safaradii hore ku wehelin jirtay.
Farmaajo oo Cadaado ku hoyday
Xamar oo lagu soo toosay xoolo qalan oo dariiqyada waran
Sh. Umal oo Kismaayo ka degay
Galmudug oo Farmaajo si diiran u qaabishay
Axmed Madoobe oo la kulmay ducaaddii Kismaayo timid